အပတျစဉျပုံမှနျတငျဆကျနကေဖြွဈတဲ့ Movie Crazy အစီအစဉျကနေ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ နိုငျငံတကာမှာ ရုံတငျပွသတော့မယျ့၊ ရုံတငျပွသနဆေဲဖွဈတဲ့ ကောငျးနိုးရာရာ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ အကွောငျးကို ရှေးခယျြဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို ပထမဆုံးမိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ဟောလိဝုဒျ Historical Period Drama အမြိုးအစားရုပျရှငျကားတကားဖွဈတဲ့ Downton Abbey !
Focus Features ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက ဖွနျ့ခြိမယျ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ ဟောလိဝုဒျရုပျရှငျဒါရိုကျတာ Michael Engler က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျလမျးကတော့ နာမညျကွီး ဗွိတိနျစာရေးဆရာ Julian Fellowes ရဲ့ ဝတ်ထုကို ရုပျရှငျအနနေဲ့ ရိုကျကူးပုံဖျောထားခဲ့တာပါ။ ၂၀ ရာစုအစောပိုငျးကာလ ဗွိတိနျနိုငျငံ ရဲ့ လူခမျြးသာ မိသားစုကွီးတစုဖွဈတဲ့ Crawley Family အကွောငျး၊ သူတို့ နထေိုငျတဲ့ စံအိမျကွီးမှာ အလုပျလုပျကွသူတှရေဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျးတှနေဲ့အတူ အခဈြ၊ အလှမျး၊ ဒရာမာ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှနေဲ့ ရှုစားကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျလမျးကို ၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈလောကျကစပွီး ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲအနနေဲ့ ITV မှာ ၅ နှဈလောကျပွသခဲ့ပွီး ပရိသတျတှေ အားပေးမှုတှေ ရရှိခဲ့ပွီး Golden Globe၊ Emmy စတဲ့ ထူးခြှနျဆုတှေ ရရှိပွီး အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
အခုထှကျရှိလာတဲ့ ရုပျရှငျကားထဲမှာတော့ ဟောလိဝုဒျ သရုပျဆောငျမငျးသား မငျးသမီးတှေ ဖွဈကွတဲ့ Hugh Bonneville၊ Jim Carter၊ Michelle Dockery ၊ Elizabeth McGovern၊ Maggie Smith စတဲ့ အရငျရုပျသံ Series ထဲမှာ ပါခဲ့ကွတဲ့ သရုပျဆောငျတှေ အမြားကွီးက ပွနျလညျပွီးတော့ ပါဝငျထားကွတာပါ။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ တခြို့ဇာတျဝငျခနျးမွငျကှငျးတှေ၊ ပွကှငျးပွကှကျတှေ၊ ပွောစကား Dialog တှကေ ကလေးတှေ ကွညျ့ရှုဖို့ မသငျ့တျောတာမို့ ဒီကားကို ကွညျ့မယျ ဆိုရငျတော့ မိဘအုပျထိနျးသူခှငျ့ပွုခကျြ Guideline နဲ့မှ ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ PG အဆငျ့ သတျမှတျထားပါတယျ။
IMDb မှာတော့ ဒီရုပျရှငျကားဟာ Rating 7.8 အထိ ရရှိထားပါတယျ။ Box Office မှာတော့ ဒီရုပျရှငျကားကို ရုံတငျပွသမယျ့ ပထမသီတငျးပတျမှာတငျ ဝငျငှအေ မရေိကနျဒျေါလာ ၁၅ သနျးကနေ ၁၆ သနျးအထိ ရရှိနိုငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
ကွာမွငျ့ခြိနျ ၁၂၂ မိနဈရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျ မိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ငယျဘဝကတညျးက ရငျးနှီးကွပွီးဖွဈမယျ့ ရမျဘိုပရိသတျတှအေတှကျပါ။ ဒီကားရဲ့ နာမညျကတော့ Rambo: Last Blood !
Action Thriller အမြိုးအစား ရုပျရှငျကားတကားဖွဈတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ Lionsgate ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက တငျဆကျလိုကျတာဖွဈပွီး အမရေိကနျရုပျရှငျဒါရိုကျ တာ Adrian Grunberg က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားဟာ Rambo ရုပျရှငျ Series တှရေဲ့ ၅ ကားမွောကျ ရုပျရှငျအနနေဲ့ ထှကျရှိလာခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံး ရုပျရှငျကိုတော့ First Blood နာမညျနဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှဈမှာ ထှကျရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ ၁၉၈၅ ခုနှဈမှာ Rambo: First Blood Part II ၊ ၁၉၈၈ ခုနှဈမှာ Rambo III နဲ့ လေးကားမွောကျရုပျရှငျကိုတော့ Rambo အမညျနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှဈက နောကျဆုံးထှကျရှိထားခဲ့တာမို့ အခြိနျ ၁၁ နှဈအကွာမှာ ထပျ ပွီး ထှကျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာတော့ ဗီယကျနမျစဈပွနျဟောငျး တယောကျဖွဈတဲ့ John Rambo က သူငယျခငျြးဖွဈသူရဲ့ သမီးပွနျပေးဆှဲခံရတာကို ကယျတငျဖို့၊ အကွမျးဖကျမှုတှေ လုပျခငျြတိုငျး လုပျနကွေတဲ့၊ နာမညျဆိုးနဲ့ ကြျောကွားတဲ့ မူးယဈအဖှဲ့အစညျးတခုနဲ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျရမယျ့ အခွအေနတှေကေို ဘယျလိုဖနျတီးပုံဖျောထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကွာခငျမှာ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာတော့ Rambo အဖွဈ ဝါရငျ့ဟောလိဝုဒျသရုပျဆောငျမငျးသားကွီး Sylvester Stallone က ပါဝငျထားပွီး သူနဲ့အတူ စပိနျသရုပျဆောငျမငျးသမီး Paz Vega နဲ့ တခွားသရုပျဆောငျတှေ အမြားကွီးက ပါဝငျထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ကွမျးတမျးတဲ့ အပဈအခတျ ဇာတျဝငျခနျးတှေ၊ ပွကှငျးပွကှကျတှေ၊ ပွောစကား Dialog တှကေ အသကျ ၁၇ နှဈအောကျ ကလေးငယျတှေ ကွညျ့ရှုဖို့ မသငျ့တျောတာမို့ ဒီကားကို ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ မိဘအုပျထိနျးသူခှငျ့ပွု ခကျြ Guideline နဲ့မှ ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ Restricted R အဆငျ့ သတျမှတျထားပါတယျ။
ထှကျရှိခဲ့ပွီးဖွဈတဲ့ Rambo ရုပျရှငျကားတှဟော ပရိသတျအားပေးလကျခံမှုတှေ ရှိခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျထိ စုစုပေါငျးဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာသနျး ၇၀၀ ကြျော ရရှိခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ ဒီကားတှထေဲမှာ အအောငျမွငျဆုံးဖွဈတဲ့ Rambo: First Blood Part II ရုပျရှငျကတော့ Box Office ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာသနျး ၃၀၀ ကြျော ရရှိခဲ့တာမို့ ခုနောကျဆုံးထှကျကားကရော ရုံတငျဝငျငှစေံခြိနျတငျနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ စောငျ့ မြှျောကွညျ့ရှုကွရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကွာမွငျ့ခြိနျ ၈၉ မိနဈရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို ဒီတခါ မိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ မွနျမာရုပျ ရှငျကားတကားဖွဈတဲ့ ညဈတှနျး !
ဧဝရကျရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက တငျဆကျလိုကျတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကတော့ အိန်ဒိယ ဇာတျလမျးတပုဒျကို တရားဝငျဝယျယူရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ မငျးခိုကျစိုးစနျနဲ့ ထကျမွတျနိုငျဇငျတို့က ဇာတျညှနျးခှဲထားပေးပွီး ဒါရိုကျတာ လူမငျးက ရိုကျကူးပုံဖျော ပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
လူ့စရိုကျသဘာဝအရ ဖွဈတတျတဲ့ ညဈတှနျးတှနျးတတျတဲ့ အကွောငျးအရာ တှကေို ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာ ပရိသတျတှကေ ရှုစားကွရမှာ ဖွဈပွီး ဒီကားထဲမှာတော့ အ ဓိက သရုပျဆောငျတှအေနနေဲ့ လူမငျး၊ ပွတေီဦး၊ အိန်ဒွာကြျောဇငျ၊ ခိုငျသငျးကွညျနဲ့ ထကျထကျထှနျးတို့က ပါဝငျထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။
သရုပျဆောငျကောငျးတဲ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတှေ ပါဝငျထားတဲ့ ဒီရုပျရှငျကား Trailer ဟာ လတျတလောမှာတော့ ဖစျေ့ဘှတျချပျေါမှာ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုကွတဲ့ အ ကွိမျရေ ၄ သနျးနီးပါး ရှိနခေဲ့တာပါ။
ဒီကားကိုတော့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၁၉ ရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို ဒီတခါ ထပျပွီး မိတျဆကျပွောပွပေးမယျ့ ရုပျရှငျကားကတော့ ဟောလိဝုဒျစတား ဘရကျပဈခေါငျးဆောငျပါဝငျထားတဲ့ ရုပျရှငျ Ad Astra !
Sci-Fi Adventure အမြိုးအစား ရုပျရှငျကားတကားဖွဈတဲ့ ဒီရုပျရှငျကိုတော့ နာမညျကွီး ရုပျရှငျထုတျလုပျရေး ကုမ်ပဏီ 20th Century Fox က တငျဆကျလိုကျတာဖွဈပွီး အမရေိကနျရုပျရှငျဒါရိုကျတာ James Gray က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားဟာ အာကာသအခွခေံတဲ့ ဇာတျကွောငျးနဲ့ ရိုကျကူးပုံဖျောထားတာဖွဈပွီး ဘရကျပဈကိုတော့ အာကာသယာဉျမှူး Roy McBride အဖွဈ ပရိသတျတှကေ ရှုစားကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ အာကာသယာဉျမှူးဖခငျကို ရှာဖှဖေို့ အာကာသထဲကို ထှကျလာရငျး လူသားမြိုးနှယျစုတှအေပျေါ ကရြောကျလာတော့မယျ့ လြှို့ဝှကျခကျြတခုကို သိလိုကျရခြိနျမှာတော့ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲ၊ ဒါကိုကာကှယျနိုငျဖို့ သူ့အနနေဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျပါ့မလားဆိုတာတှကေို ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ဒီကားထဲမှာ ပရိသတျတှကေ ရှုစားကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာတော့ ဘရကျပဈနဲ့အတူ တခွားဟောလိဝုဒျသရုပျဆောငျတှေ ဖွဈကွတဲ့ Tommy Lee Jones၊ Ruth Negga၊ Liv Tyler နဲ့ Donald Sutherland တို့ကလညျး ပါဝငျထားကွပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ တခြို့ဇာတျဝငျခနျးမွငျကှငျးတှေ၊ ပွကှငျးပွကှကျတှေ၊ ပွောစကား Dialog တှကေ အသကျ ၁၃ နှဈအောကျ ကလေးငယျတှေ ကွညျ့ရှုဖို့ မသငျ့ တျောတာမို့ ဒီကားကိုကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ မိဘအုပျထိနျးသူခှငျ့ပွုခကျြ Guideline နဲ့ မှ ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ PG-13 အဆငျ့ သတျမှတျထားပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားရဲ့ အထူးပှဲပွသမှုကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလတုနျးက နာမညျကွီး ရုပျရှငျပှဲတျောတခုဖွဈတဲ့ Venice Film Festival မှာ ပွုလုပျခဲ့ပွီး ခြီးကြူးမှုတှလေညျး ရရှိထားပါတယျ။
IMDb မှာတော့ ဒီရုပျရှငျကားဟာ Rating 7.7 အထိ ရရှိထားပါတယျ။ ဘတျဂတျြ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၈၀ နဲ့ ၈၇ ဒဿမ ၅ သနျး အကုနျအကခြံရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီ ရုပျရှငျကားကိုတော့ Box Office မှာ ရုံတငျပွသမယျ့ ပထမသီတငျးပတျမှာတငျ ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၇ သနျးနဲ့ သနျး ၂၀ ကွား ရရှိနိုငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
ကွာမွငျ့ခြိနျ ၁၂၄ မိနဈရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို နောကျဆုံးမိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး မွနျမာအခဈြဟာသရုပျရှငျ ပရိသတျတှေ ကွိုကျနှဈသကျကွမယျ့ ဘာလာလာ !
ဒီကားကိုတော့ တျောဝငျမငျးသား ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက တငျဆကျလိုကျတာ ဖွဈပွီး ညာလကျတျောရဲ့ ဇာတျလမျးကို မိုးနီလှငျက ဇာတျညှနျးခှဲပေးထားပွီး ဒါရိုကျတာ ကိုဇျော(အရုဏျဦး)က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာတော့ သရုပျဆောငျမငျးသားမငျးသမီးတှေ ဖွဈကွတဲ့ မွငျ့မွတျ၊ ကြျောကြျောဗို၊ ရဲလေး၊ သကျမှနျမွငျ့တို့နဲ့အတူ တခွားသရုပျဆောငျတှေ အမြားကွီးပါ ဝငျသရုပျဆောငျထားကွပွီး ဘာလာလာဆိုတဲ့အတိုငျး ဘယျလိုအလှဲအခြျော၊ ဟာသ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှနေဲ့ ရိုကျကူးပုံဖျောထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကွာခငျမှာ ရှုစား ကွရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားရဲ့ အထူးပှဲပွသမှုကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ ၁၆ ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့၊ သမ်မတရုပျရှငျရုံမှာ ပွုလုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာတော့ ဒီရုပျရှငျကား Trailer ကို ဖစျေ့ဘှတျချပျေါမှာ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှုကွတဲ့ အကွိမျရေ ၂ သနျးခှဲနီးပါး ရှိနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အပတ်စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်နေကျဖြစ်တဲ့ Movie Crazy အစီအစဉ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့်၊ ရုံတင်ပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ဟောလိဝုဒ် Historical Period Drama အမျိုးအစားရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ Downton Abbey !
Focus Features ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ဖြန့်ချိမယ့် ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Michael Engler က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ နာမည်ကြီး ဗြိတိန်စာရေးဆရာ Julian Fellowes ရဲ့ ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားခဲ့တာပါ။ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကာလ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ရဲ့ လူချမ်းသာ မိသားစုကြီးတစုဖြစ်တဲ့ Crawley Family အကြောင်း၊ သူတို့ နေထိုင်တဲ့ စံအိမ်ကြီးမှာ အလုပ်လုပ်ကြသူတွေရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူ အချစ်၊ အလွမ်း၊ ဒရာမာ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်လောက်ကစပြီး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲအနေနဲ့ ITV မှာ ၅ နှစ်လောက်ပြသခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုတွေ ရရှိခဲ့ပြီး Golden Globe၊ Emmy စတဲ့ ထူးချွန်ဆုတွေ ရရှိပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုထွက်ရှိလာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင်မင်းသား မင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Hugh Bonneville၊ Jim Carter၊ Michelle Dockery ၊ Elizabeth McGovern၊ Maggie Smith စတဲ့ အရင်ရုပ်သံ Series ထဲမှာ ပါခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ အများကြီးက ပြန်လည်ပြီးတော့ ပါဝင်ထားကြတာပါ။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက ကလေးတွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
IMDb မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Rating 7.8 အထိ ရရှိထားပါတယ်။ Box Office မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ရုံတင်ပြသမယ့် ပထမသီတင်းပတ်မှာတင် ဝင်ငွေအ မေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းကနေ ၁၆ သန်းအထိ ရရှိနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၁၂၂ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ငယ်ဘဝကတည်းက ရင်းနှီးကြပြီးဖြစ်မယ့် ရမ်ဘိုပရိသတ်တွေအတွက်ပါ။ ဒီကားရဲ့ နာမည်ကတော့ Rambo: Last Blood !
Action Thriller အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ Lionsgate ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက် တာ Adrian Grunberg က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Rambo ရုပ်ရှင် Series တွေရဲ့ ၅ ကားမြောက် ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ကိုတော့ First Blood နာမည်နဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ Rambo: First Blood Part II ၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ Rambo III နဲ့ လေးကားမြောက်ရုပ်ရှင်ကိုတော့ Rambo အမည်နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားခဲ့တာမို့ အချိန် ၁၁ နှစ်အကြာမှာ ထပ် ပြီး ထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ဗီယက်နမ်စစ်ပြန်ဟောင်း တယောက်ဖြစ်တဲ့ John Rambo က သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ သမီးပြန်ပေးဆွဲခံရတာကို ကယ်တင်ဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေကြတဲ့၊ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ မူးယစ်အဖွဲ့အစည်းတခုနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ Rambo အဖြစ် ဝါရင့်ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး Sylvester Stallone က ပါဝင်ထားပြီး သူနဲ့အတူ စပိန်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Paz Vega နဲ့ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေ အများကြီးက ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အပစ်အခတ် ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြု ချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ထွက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ Rambo ရုပ်ရှင်ကားတွေဟာ ပရိသတ်အားပေးလက်ခံမှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားတွေထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Rambo: First Blood Part II ရုပ်ရှင်ကတော့ Box Office ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့တာမို့ ခုနောက်ဆုံးထွက်ကားကရော ရုံတင်ဝင်ငွေစံချိန်တင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ စောင့် မျှော်ကြည့်ရှုကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၈၉ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ဒီတခါ မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ မြန်မာရုပ် ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ညစ်တွန်း !
ဧဝရက်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ အိန္ဒိယ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကို တရားဝင်ဝယ်ယူရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းခိုက်စိုးစန်နဲ့ ထက်မြတ်နိုင်ဇင်တို့က ဇာတ်ညွှန်းခွဲထားပေးပြီး ဒါရိုက်တာ လူမင်းက ရိုက်ကူးပုံဖော် ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့စရိုက်သဘာဝအရ ဖြစ်တတ်တဲ့ ညစ်တွန်းတွန်းတတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီကားထဲမှာတော့ အ ဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ လူမင်း၊ ပြေတီဦး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ခိုင်သင်းကြည်နဲ့ ထက်ထက်ထွန်းတို့က ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ လတ်တလောမှာတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အ ကြိမ်ရေ ၄ သန်းနီးပါး ရှိနေခဲ့တာပါ။
ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ဒီတခါ ထပ်ပြီး မိတ်ဆက်ပြောပြပေးမယ့် ရုပ်ရှင်ကားကတော့ ဟောလိဝုဒ်စတား ဘရက်ပစ်ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင် Ad Astra !
Sci-Fi Adventure အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ 20th Century Fox က တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ James Gray က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားဟာ အာကာသအခြေခံတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီး ဘရက်ပစ်ကိုတော့ အာကာသယာဉ်မှူး Roy McBride အဖြစ် ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အာကာသယာဉ်မှူးဖခင်ကို ရှာဖွေဖို့ အာကာသထဲကို ထွက်လာရင်း လူသားမျိုးနွယ်စုတွေအပေါ် ကျရောက်လာတော့မယ့် လျှို့ဝှက်ချက်တခုကို သိလိုက်ရချိန်မှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ၊ ဒါကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ သူ့အနေနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလားဆိုတာတွေကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ဘရက်ပစ်နဲ့အတူ တခြားဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Tommy Lee Jones၊ Ruth Negga၊ Liv Tyler နဲ့ Donald Sutherland တို့ကလည်း ပါဝင်ထားကြပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့် တော်တာမို့ ဒီကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့ မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လတုန်းက နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုဖြစ်တဲ့ Venice Film Festival မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ချီးကျူးမှုတွေလည်း ရရှိထားပါတယ်။
IMDb မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Rating 7.7 အထိ ရရှိထားပါတယ်။ ဘတ်ဂျတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ နဲ့ ၈၇ ဒဿမ ၅ သန်း အကုန်အကျခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီ ရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ Box Office မှာ ရုံတင်ပြသမယ့် ပထမသီတင်းပတ်မှာတင် ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းနဲ့ သန်း ၂၀ ကြား ရရှိနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၁၂၄ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး မြန်မာအချစ်ဟာသရုပ်ရှင် ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ့် ဘာလာလာ !
ဒီကားကိုတော့ တော်ဝင်မင်းသား ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး ညာလက်တော်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို မိုးနီလွင်က ဇာတ်ညွှန်းခွဲပေးထားပြီး ဒါရိုက်တာ ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မြင့်မြတ်၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ ရဲလေး၊ သက်မွန်မြင့်တို့နဲ့အတူ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေ အများကြီးပါ ဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပြီး ဘာလာလာဆိုတဲ့အတိုင်း ဘယ်လိုအလွဲအချော်၊ ဟာသ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာ ရှုစား ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၂ သန်းခွဲနီးပါး ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous story တရားစှဲခံနရေသညျ့ ဧရာဝတီတိုငျးလှတျတျော ဒုဥက်ကဋ်ဌဟောငျး လှတျတျောတကျခှငျ့ရမညျ
Next story ပငျနယျတီ လှဲခြျောခဲ့သညျ့ ခြဲလျဆီး ကှငျးလယျလူ ဘာကလေ ဝဖေနျခံနရေ(ရုပျသံ)